महेश, शेरबहादुरपछि शेरधन राईले पनि गरे उम्मेदवारी घाेषणा, कसले मार्ला बाजी ? - अन्नपूर्ण टाइम्स
महेश, शेरबहादुरपछि शेरधन राईले पनि गरे उम्मेदवारी घाेषणा, कसले मार्ला बाजी ?
९ मंसिर २०७८ बिहीबार १५:४५
चितवन – प्रदेश नं १ का पूर्वमुख्यमन्त्री शेरधन राईले एमालेको सचिव पदमा उम्मेदवारी दिने भएका छन् । एमाले पोलिटव्युरो सदस्यसमेत रहेका उनले चितवनमा हुने एमालेको १० औँ महाधिवेशनमा आफूले सचिव पदमा उमेदारी दिन लागेको जानकारी दिएका हुन् ।
चितवनमा सुरु हुन लागेको महाधिवेशनमा सहभागी हुन बिहीबार भरतपुर पुगेका राईले सचिवमा उम्मेदवारी दिनेगरी तयारी गरेको प्रतिक्रिया दिए ।
यसैबीच, केन्द्रीय सदय महेश बस्नेत र केन्द्रीय कार्यालयका सचिव शेरबहादुर तामाङले पनि सचिवमा उम्मेदवारी दिने बताइसकेका छन् । त्यस्तै गाेकुल बास्काेटा, पार्वत गुरुङ र एमाले कर्णाली प्रदेश सहसंयोजक यामलाल कँडेलले पनि सचिवमै उम्मेदवार बन्ने चाहना चितवन पुगेर पनि दोहोर्याएका छन् ।
सचिव योगेश भट्टराईले पनि चितवन पुगेर सचिवमा दोहोरिने इच्छा व्यक्त गरेका छन् । उनले आफूसँग अझै १५ वर्ष सक्रिय राजनीति गर्ने सुविधा रहेको भन्दै अहिले सचिवमै दोहोरिन चाहेको बताए । एमालेमा सचिव ७ जना चुनिएर आउनेछन्।
नेकपा एमालेकी केन्द्रीय सदस्य एवं प्रतिनिधि सभाकी सांसद विन्दा पाण्डेले पार्टीको उपमहासचिव पदमा उमेदवारी दिने भएकी छिन् । एमालेको दशौं महाधिवेशनमा आफूले उपमहासचिवमा उठ्ने तयारी गरिरहेको पाण्डेले बताएकी छन् ।